फ्रान्स आइपुगे नवनियुक्त राजदुत दिपक अधिकारी - VOICE OF NEPAL
फ्रान्स आइपुगे नवनियुक्त राजदुत दिपक अधिकारी
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:४५ 187 ??? ???????
पेरीस, फ्रान्स ।
फ्रान्सका लागि नवनियुक्त आवासीय नेपाली राजदूत दीपक अधिकारी आज ५ अप्रिलका दिन फ्रान्स आइपुगेका छन् । उनी पोर्तुगल, मोनाको र एण्डोराका लागि गैह्र आवासीय नेपाली राजदुत समेत हुन्। गत पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
माघको पहिलो साता संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वसम्मतबाट उनको सिफारीसलाई अनुमोदन गरेको थियो । करिब एक महिनादेखि फ्रान्सको राजदूतावास कार्यवाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईले सम्हालेका छन् । कार्यवाहक राजदूत भट्टराई पनि आफ्नो कार्यकाल समाप्तिसंगै केही दिनमा नेपाल फर्किने क्रममा छन् ।
नवनियुक्त राजदूत अधिकारीको फ्रान्समा पहिलो जिम्मेवारीस्वरुप नेपाल फ्रान्स द्विपक्षीय सम्बन्धको ७० औं वर्षको लागि कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् । यस अवसरमा नेपाली राजदूतावासले अप्रिलको तेस्रो साता पेरिसमा एउटा विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको छ ।
राजदूतको रुपमा पेरिस आउनु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापालका रुपमा कार्यरत अधिकारीले परराष्ट्रमा लामो समय अनुभव संगालेका छन् ।